I-china ORIENTMED Soft-Touch Safety Lancet abakhiqizi nabaphakeli | EMUVA PHAMBILI
Ukuphepha: Inaliti ye-lancet yokuphepha ethinta okuthambile ifihlwe ngokuphepha ngaphambi nangemva kokusetshenziswa
Ubuhlungu obuncane: Ukuklanywa kwemithombo emibili kanye ne-tip-beveled inaliti yokuthambisa ukungena ngesivinini esikhulu nokunciphisa izinhlungu, okwenza isampuli yegazi izwakale njengokuthinta okuthambile
Okulula: Thinta ngqo indawo yesampula yegazi bese ucindezela ngobumnene.
Ububanzi benaliti / ukujula
Ama-50pcs noma ama-100pcs / Ibhokisi
Ukuphepha: Inaliti ye-soft-touch lancet yokuphepha ifihlwe ngokuphepha ngaphambi nangemva kokusetshenziswa
Ubuhlungu obuncane: Idizayini emibili idizayinelwe inaliti yesinaliti yokuthambisa ukungena ngesivinini esikhulu nokunciphisa izinhlungu, okwenza isampuli yegazi izwakale njengokuthinta okuthambile
Okulula: Thinta ngqo isampuli yegazi bese ucindezela ngobumnene.
Okusha: Ukuthuthukiswa ngokuzimela, ubuchwepheshe obunelungelo lobunikazi. Idizayini yokwakheka kokuzibulala yenza abasebenzi bezokwelapha neziguli bazizwe bephephe ngokwengeziwe futhi bethembekile.
1.Twist bese ususa ikepisi evikelayo ku-lancet
2.Pace ukuphela okumhlophe kwe-lancet kusayithi lokuhlola
Cindezela i-lancet phansi ubheke indawo yokuhlola ukuze usebenzise i-lancet
Ezinye izinhlobo ezithuthukile:
Langaphambilini I-TWIST IGAZI LANCET
Olandelayo: 50D ANEROID SPHYGMOMANOMETER
I-TWIST IGAZI LANCET
IGAZI LANCET ELINGaguquguquki
IDIVAYISI YOKUTSHALWA KWEGAZI